Wararka Cayaaraha - BBC News Somali
Image caption Adam Lalana ayaa goolka koowaad dhaliyey
England iyo Spain oo 2-2- ku kala hoyday:
Xulalka qaramadda Ingiriirska iyo Spain oo ciyaar saaxiibtinimmo ku yeeshay garoonka Wembley ee magaaladda London ayaa ku dhamaatay barbardhac 2-2 iyadoo Spain ay ciddiyaha ku dagaalantay ka dib markii labada gool ay la timid daqiiqadihii ugu dambeeyey.
Xulka England ayaa hogaanka ciyaarta qabtay daqiiqadii 9-aad ka dib qalad diilinta 18-aad ee goosha Spain laga galay weeraryahanka England Jamie Vardy kaasi oo jilaafeyey goolhayaha Spain Pepe Reina, waxaana gool-ku-laadkii loo dhigay xulka martida loo ahaa shabaqa si xarago leh ugu hubsaday Adam Lalana. qaybtii hore ayaa lagu kala nastay 1-0 oo Ingiriisku ku hogaaminayeen.
Markii la isku soo laabtay qaybtii labaad Spain sadex daqiiqo oo garoonka lagu jiray waxaa xaalka ku sii xumeeyey gool madaxa uu si caaqibo leh ugu dhaliyey Jamie Vardy kaasi oo ciyaarta ka dhigay 2-0 daqiiqadii 48-aad.Spain inkastoo ay kubad haysashada badnayd haddana Ingiriisku wuxuu awooddiisii isugu geeyey in goolashiisa uu difaacdo.
Laakiin daqiiqadii 89-aad ciyaaryahan Iago Aspas ayaa kubad si xarago leh uu dhisay wuxuu lugta bidix u dabamariyey goosha goolhayaha Ingiriiska, taasi oo niyadda u soo celisay ciyaartooyda Spain kuwaasi oo la yimid carar iyo awood dheeraad ah.
Shan daqiiqo oo ciyaarta lagu daray weeraryahan Isco ayaa Ingiriiska ka dhaliyey gool daqiiqadii 95-aad kaas oo qalbiga jabiyey taageerayashii Ingiriiska oo ku hamminayey in caawa guul ay kala hoyden garoonkooda.
Spain lixdii kulan ee ugu dambeysay ee Ingiriiska oo uu ku jiro kulankii xalay waxay badisay 4 mar laakiin 35 sano garoonka qaranka Ingiriisku uu ku ciyaaro ee Wembley kuma badin.
Tababaraha kumeelgaarka ah ee Ingiriiska Gareth Southgate oo afartii kulan ee loogu tagalagalay in uu hayo xulka wadankiisa ay uga ekayd kulankii xalay, wuxuu sugayaa in si rasmi ah loogu magacaabo xulka.
Messi oo beeniyey in xulka wadankiisu maandooriye isticmaalo
Laacibka kooxda Barcelona iyo qaranka Argentine Lionel Messi ayaa beeniyey eedeymmo culus oo tilmaamaya in ciyaartoyda qarankiisu ay adeegsadeen maandooriyaha Mariwanaha.
Ka dib ciyaartii xulkiisu 3-0 uga badiyey xulka qaranka Colombia ayaa Messi wuxuu sheegay in inkastoo ay soo gaareen eedeymmo badan oo arinkasi la xiriira haddana ay yihiin "kuwa xushmad la'aan ah".
Hadalkan ayaa ka dambeeyey ka dib markii mid ka mid ah Raadiyayaasha ka faaloodda ciyaaraha uu sheegay in weeraryahanka xulka Argentine Ezequiel Lavezzi uu isticmaalay maandooriyaha Mariwanaha ka dib markii uu dhamaystay tababar, laakiin arintaas ayuu gaashaanka u daruuray Lavezii oo sheegay in maxkamad la tagayo wariyahaas.
Eedeymaha loo jeediyey ciyaartooyda Argentine ayaa timid ka dib ciyaartii Brazil uga badisay 3-0 taasi oo mugdi galisay rajada ka qayb galka koobka aduunka ee 2018 lagu qaban doono wadanka Ruushka.Argantine hadda waxay ku jirtaa kaalinta 5-aad oo waxaa ka horreeya wadamadda Brazil, Urugway, Ecuador iyo Chile.
Goolhaye Buffon oo xalay rikoor dhigay:
Goolhayaha facawayn ee dalka Talyaaniga Gianluigi Buffon ayaa xalay rikoor horay uu u haystay goolhayaha Spain Iker Casillas mid la mid ah dhigay ka dib markii uu xulka wadankiisa u saftay kulankii 167-aad.
Ciyaartii saaxiibtinimmo ee xalay Talyaanigu magaalada Milan kula yeeshay xulka Jarmalka ayaa Buffon wuxuu ciyaaray 45 daqiiqo isagoo shabaqiisa gool ka ilaaliyay.
Kulanka ayaa ku soo dhamaaday 0-0 iyadoo labada kooxood isku dayeen inay guusha la hoydaan.
Faransiiska iyo Ivory Coast oo barbardhac kulankodoii ku dhamaaday
Ciyaartoda xulka qaranka Faransiiska ayaa xalay ka mutaystay taageerayashooda ka dib ciyaartii xulka Ivory Coast ay la yeesheen ee ku soo dhamaatay 0-0 ee ka dhacday magaalada Paris.
"Waan rafaadnay, taasina ma ahan mid aan doonayo inaan xusuusto bilowga 2016" ayuu yiri tababaraha xulka Faransiiska Mr Deschamps, kaasi oo kooxdiisu gaartay final-ka ciyaarihii Euro 2016 ee wadankiisu marti galiyey.